5 Atụmatụ ịdezi vidiyo maka ndị na-ere ahịa | Martech Zone
Ire ahia vidiyo abụrụla otu n’ime ụzọ kachasị elu iji zụọ ahịa n’ime afọ iri gara aga. Site na ọnụahịa nke akụrụngwa na mmemme mmezi ka ha na-adaba ka a na-ejikarị ha eme, ọ nwetala ọtụtụ ọnụ. Mmepụta vidiyo nwere ike ịghọ aghụghọ iji nweta oge ole na ole mbụ ị gbalịrị ya.
Chọta ụzọ ziri ezi iji setịpụ vidiyo maka ire ahịa siri ike karịa edezi nkịtị. Kwesịrị itinye ngwaahịa gị n'ìhè kachasị mma ma na-emekwa vidiyo dị egwu. Isi ihe ị chọrọ dezie a video ọma bụ ahụmahụ. Ọtụtụ mgbe ị na-eme ya ka mma ị ga-enweta.
E nwere mgbe ole na ole ngwá ọrụ na aghụghọ na-eme ka ị a mma video nchịkọta akụkọ ngwa ngwa. Nke a bụ ndepụta nke usoro na usoro iji mee ka ị bụrụ ezigbo ahịa ma mee ka vidiyo gị dị mma ozugbo.
Ndụmọdụ 1: Malite ike ike
Enweghị isi na ịrụ ọrụ oge ma ọ bụ nlele vidiyo tupu ịmalite ikewapụ. Inweta nsogbu ike ọnụ naanị chọrọ ịdebe mkpachị kachasị mma gị n'usoro oge ka ị wee nwee echiche siri ike banyere ihe obere vidiyo ị na-eji na ebe ha kwesịrị ịdị. Nke ahụ ga-eme ka edezi ihe dị mfe karịa ma gwa gị ihe mkpachị ịchọrọ.
Akụkụ a agaghị adị mma. Ga-enwe vidiyo na-adịghị agbanwe agbanwe n'usoro iwu ma ọ nweghị onye n'ime ha ga-arụkọ ọrụ ọnụ. Enwela nkụda mmụọ n'oge a n'ihi na nke a bụ akụkụ ebe vidiyo gị amalitebeghị ịmalite.
Iwere obere vidiyo gị ma mee ka ha banye n'usoro iwu bụ ebe kachasị mma ịmalite. Enweghị mkpa ịmalite ịkatọ ọrụ gị ma ọ bụ iwe iwe n'oge a. Ekwesighi ka ọ dị mma ma ọ ga-adị n'usoro.
Ndụmọdụ 2: Don't over Dezie
Ọ gwụla ma ị na-atọ ọchị nke ihe nkiri na-enweghị ihe mere tinye ukwuu na gị video n'oge edezi usoro. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-amalite na ọ nwere ike iyi ka a otutu fun iji niile pụrụ iche utịp na noises na gị edezi omume na-enye. Emela nke ahụ, ọ gaghị adị mma ma ọ bụ ọkachamara.
Mee ka ntụgharị gị dị mfe ma bụrụ ihe ebumpụta ụwa. Chọghị inwe vidiyo nke na-adọpụ uche gị n'ihe ị na-achọ ire ma ọ bụ nke yiri igwe mmadụ. Ka gị video na-ekwu maka onwe ya na-enweghị gị edezi software muddying ya.
Ntugharị gị kwesịrị dakọtara ụda nke vidiyo ahụ na-enweghị ịgbanwe ozi izugbe. Edezi software bụ fun na-adị mfe na-ebu pụọ. Ọ ka mma idezi ma mee mgbakwunye karịa ka a ga-esi kpuchie ya ma bepụ ọtụtụ mmetụta.
Ndụmọdụ 3: Jiri Ezi Software
E nwere ọtụtụ narị video edezi mmemme ị nwere ike ịzụta ma ọ bụ nweta n'efu. Gbalia ihu na igha eme nnyocha tupu inwee ihe omume edezi. Ihe dị iche n’etiti nnukwu vidiyo na ihe ọjọọ nwere ike ịgbada sọftụwia ị na-eji.
Ọtụtụ mgbe ị ga-akwụ ụgwọ maka mma edezi software. Atụla ụjọ site na ọnụahịa ha anaghị adị oke ọnụ ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị ga-enweta ego ọzọ. Lelee nyocha na ihe ndị editọ ọkachamara nwere ikwu maka sọftụwia ahụ tupu ịzụta tupu ịmara na ị nwere ike ịtụkwasị ya obi.
Ozugbo ị họrọ gị edezi software mkpa ka ị mụta otú iji ya dị ka nke ọma dị ka o kwere. Lelee vidiyo vidiyo nke gbaruru otu ihe si arụ ọrụ ma gụọ ọtụtụ akwụkwọ-nwere ike ịkọwara gị ụfọdụ ọrụ. Ihe kachasị mma sọftụwia gị ka vidiyo gị ga - adị mma.
Ndụmọdụ 4: Leba anya na egwu
Ga-achọta ọtụtụ ebe dị iche iche ị ga-enweta ajarilty-free egwu na ntanetị oge gị dị ka onye ndezi. Jide n'aka na i jiri egwu ahụ nke oma ma jiri nwayọ. Ikwu egwu n’oge na-ekwesịghị ekwesị nwere ike imebi vidio kpamkpam.
Ihe mbụ ị ga - eme mgbe ị na - ahọrọ egwu bụ ijide n’aka na ọ nweere onwe ya iji ma ọ bụ na ị nwere ego akwụ ụgwọ iji kwụọ maka egwu. Mgbe ahụ ịkwesịrị ikpebi ụdị egwu ga-akacha mma na vidiyo ahịa gị. Egwú dị nro ma ọ bụ egwu dị egwu nwere ike ịgbanwe vidiyo kpamkpam wee jide n'aka na ị họọrọ n'ụzọ ziri ezi ma eleghị anya gbalịa ọtụtụ nhọrọ egwu dị iche iche.
N'ikpeazụ, ịkwesịrị ijide n'aka na egwu ahụ na-agbakwunye ihe na vidiyo gị. Ọ bụrụ na egwu ahụ bụ naanị ihe ọzọ nke na - enweghị ihe dị iche na vidiyo karịa ka ọ ga - akachasị mma ịhapụ egwu ahụ. Music nwere ike ịgbanwe a video ma ọ bụghị mgbe niile mkpa.
Ndụmọdụ 5: Can nweghị ike idozi ihe niile
Video edezi software bụ ịtụnanya na ike idozi ọtụtụ ihe na i nwere ike na-eche dị ka ihe niile nwere ike ofu ke post-mmepụta. Nke ahụ abụghị eziokwu ma ọ bụrụ na ịgbanyeghị vidio ị na-edezi, ị nwere ike ịnwe nrụgide karịa iji mee ka ihe nkiri a dị oke mma ka ị ghara inweta ụta maka mmejọ. Eziokwu bu na enwere ihe ufodu ndi n’enweghi ike idezi.
Nwere ike idozi ọkụ na ọtụtụ ụda na mmemme mmezi mana ị gaghị enwe ike ịme ya zuru oke. Onweghị ihe dị njọ n’enweghị ike idozi ihe mebiri emebi na fim. Ndezi gị dị idozi ihe ị nwere ike ime ma mee ka ihe niile dị mma, ọ bụghị ịrụ ọrụ ebube.
Nye onwe gị ezumike ma cheta na ọbụlagodi ndị editọ kachasị mma enweghị ike idozi vidiyo ọjọọ. Mee ihe kachasị mma i nwere ike ime ma hụ na ị dị mpako na ọrụ gị. Ga-enwe ike idozi ọ bụla otu ihe ma ị ga-eme ka ihe niile na-abịa ka mma karịa ka ọ dị tupu ị malitere.
Edezi vidiyo bụ ọrụ ị na-amụta ka ị na-aga. Ka ị na-edezi ihe ka mma ị ga-enweta na iji ngwanrọ na ịchọpụta ihe ị nwere ike ime. Ka ị na-amụta, ị ga - abụ ọdee akwụkwọ kacha mma ma nwekwuo ọ enjoyụ na ọrụ gị.
Ndị editọ ukwu maara na usoro ha siri ike ga-adị oke njọ ma ọ dị mma. Sọftụwia bụ ihe kachasị mkpa onye editọ na-eji wee hụ na nke gị bụ ọkwa kachasị elu, yana mgbe niile edezi ya tupu ịmezie ihe edezi. Onweghi ihe ị n’enweghị ike ịme ka mma na edezi kama ị nwekwara ike ime ka ihe dị nzuzu ma ọ bụrụ na i mee ọtụtụ ihe.
N'ikpeazụ, cheta na ị bụ onye nchịkọta akụkọ, ọ bụghị onye anwansi. Enwere ụfọdụ ihe ị gaghị enwe ike idozi na ọ dị mma. Ndị a bụ ndụmọdụ ole na ole iji nyere gị aka ịbụ onye editọ kachasị mma maka vidiyo vidiyo.
Tags: Vidio Ahịaike ịkpụAtụmatụntinye vidiyongwanrọ vidiyo